Easy Buttercream Qaboojinta + Video Tutorial - Dhaxan-Qaboojin Iyo Iicil
Waxaan jeclahay qaboojiyaha fudud ee buttercream (farsamo ahaan majaajilis Swiss meringue buttercream) maxaa yeelay uma baahnid inaad kululeyso ukun kasta oo cadaan ah (mahadsanid ukunta la dubay), waxay dhadhamineysaa kareemo aad u fiican oo aan aad u macaaneyn oo kaliya waxay qaadataa 10 daqiiqo in la sameeyo! Waad ku garaaci kartaa tan, waxaad u adeegsan kartaa hoosta dhadhanka oo waxay aad uga dhadhan fiican tahay dukaanka la iibsaday! Waxaan balan qaadayaa qofkasta inuu sidan sameyn karo!
Qaboojintan subag-biyoodka ayaa ah cuntada aan jeclaan lahaa markii aan samaynayay 5 keega arooska wiiggii. Hadda waa dhaxanta kaliya ee aan isticmaalo oo macaamiishaydu way jecel yihiin. Way ka fiicantahay qabowga macaan ee aadka u macaan ee aan u baran jiray inaan ku arko keega.
SIYAASADDA BILAASHA BULSHADA
Waxaad noqon kartaa sida, ukun cadaan… dhaxan? Waa maxay? Ma ahayn ilaa aan aaday iskuulka keega ee 2010 markii ugu horeysay ee aan maqlo noocyo kala duwan oo subag macaan. Noocyo badan oo subag ah, sida Swiss, Talyaani, iyo Faransiis ukumo ayaa ku jira. Ukunta inta badan waxaa lagu karbaashaa meringue khafiif ah oo qalafsan ka dibna subagga la jilciyey waa la garaacayaa. Markaad meringue u isticmaasho saldhiggaaga subagga, uma baahnid inaad isticmaasho sonkor badan taas oo keeneysa nal, jilicsan, iyo subag macaan. dhadhamiya badan sida jalaatada. YUM!
Easy buttercream wuxuu la mid yahay Swiss Meringue Buttercream marka laga reebo inaadan kululeynin ukunta cad iyo sonkorta, ku karbaash meringue, ha qabow, iwm. Thanks to ukunta cad ee la kariyey, waad u boodi kartaa marxaladda karbaashka mana u baahnid inaad isku qasdid meringue ah! Dhadhanka iyo cufnaanta subagga macaan ee fudud waxay ku dhowdahay inay la mid tahay dhaqanka SMBC. Miyaan sheegay tan inay fududahay?
WAA MAXAY CUNTA UU KU LEEYAHAY BADBAADADA?
Waxay kuxirantahay wadanka aad kujirto, waxaa suuragal ah ama aadan haysan marin ukunta cad oo la kariyey. Meelaha badankood, waxaa laga helaa sanduuq ku jira qaybta ukunta. Ereyga 'la dubay' wuxuu ku saarnaan doonaa sanduuqa meel, badiyaa aad u yar.
Dhajinta waa habka kululaynta tartiib-tartiib ah si loo dilo cudurrada ku dhasha cunnooyinka isla markaana looga dhigo badeecad aamin ah in la cabo ama la cuno Waxyaabo badan ayaa la kariyay, sida casiir liin dhanaan, caano, iyo khamri. Ukunta ukunta la miiray ayaa amaan u ah qof kasta inuu cuno.
Haddii aadan heli karin ukun cad oo la dubay waad heli kartaa naftaada u kari oo kaliya isticmaal ukunta cad ama adigu waad isticmaali kartaa Swiss Meringue Buttercream cunto karinta halkii.
TABABAR BILAASH AH OO TALLAABO AH
Tallaabada 1 - Ku rid ukunta cad oo la kariyey iyo sonkorta budada ah baaquli fiicni dhalada. Ku dhaji foornada oo isku dar maaddooyinka si hoose, ka dibna kor ugu karbaash 1-2 daqiiqo si aad u milisid sonkorta budada ah. Uma baahnid inaad ku karbaasho meringue.
Talo-bixin - SMBC-da soo-jireenka ah, ukunta cusub iyo sokorta granulated waa la isla kariyaa si loo baabi'iyo sokorta loona kariyo ukunta. Waxaan ka boodi doonnaa talaabadan adoo isticmaalaya ukunta cad iyo sonkorta budada ah.
Tallaabada 2 - Ku dar milixdaada iyo soosaarida vaniljka. Waxa kale oo aad beddeli kartaa wixii kale ee dhadhamiya ee aad jeceshahay, waan jeclahay liinta ama liinta laga soosaaray. Isticmaalidda soosaarida cad ee vaniljku waxay ku dambayn doontaa cadcad dhammaysatay cad.
Tallaabada 3 - Ku dar subaggaaga jilicsan ee guntimaha ku karbaash leh bulaacada dusha sare. Haddii aad isticmaaleyso ukun cad oo la kariyey oo ku jirta qaboojiyaha markaa waxaad dareemi kartaa qarkiisa oo sameysmaya subag qabow. Tani waa wax caadi ah oo si fudud ayaa loo hagaajin karaa.
Si fudud u jooji makiinadaada oo ka saar qiyaastii 1/3 koob oo ah buttercream. Ku dhalaal tan microwave illaa 20 ilbidhiqsi ama illaa ay si dhib yar u dhalaasho. Ma rabtid inay kululaato!
Iskudarsii isku dar ah dibidaada buttercream-ka iyo diirimaadka ka dhalaalaya buttercream-ka ayaa sababi doona inay kuligood wada yimaadaan oo ay yeeshaan kareem. Tani si daacadnimo ah ayey uga fududdahay soo bixida ukunta cad waqtiga kahor oo iskudayaysa inay keento heerkulka qolka (ugu yaraan aniga ahaan).
Tallaabada 4 - Hadda u oggolow karbaashka buttercream illaa uu caddaan iyo qalafsanaan. Tani waxay ku qaadan doontaa 8-10 daqiiqo KitchenAid, laakiin dhadhamso si aad u aragto goorta ay dhammaato. Markii aysan u dhadhamin sida subagga oo ay u macaan tahay sida jalaatada, waa la dhammeeyay!
Talo-siinin - Haddii aad rabto subaggaaga subagga leh oo aad u siman, labanlaab raashinka si markaa heerka buttercream uu uga sarreeyo lifaaqa whisk. Maaddaama buttercream uu karbaashayo, waxay ka shaqeysaa dhammaan goobooyinka si aad u hesho buttercream aad u siman oo aan lahayn xumbo.
Tallaabada 5 - (Ikhtiyaar) Si aad subaggaaga subag uga dhigto caddaan saa'id ah, isticmaal dhamaadka cadayga si aad ugu darto dhibic TINY ah midabaynta cuntada guduudan iyo ilaa 1 TBSP oo ah midabaynta cuntada cad. Guduudka ayaa ka hortagi doona jaallaha ku jira subagga oo ka dhigi doona mid aad u cad. Isku qas.
TALO & FAQ
Isticmaalidda tayo wanaagsan, subagga dhabta ah ayaa ugu fiican, laakiin waxaad ku beddeli kartaa margarine, subagga vegan, ama khudradda gaagaaban. Ma ballan qaadi karo in dhadhanka isku mid noqon doono, laakiin waad isticmaali kartaa wax kasta oo aad doorbido!
WAA MAXAY SABABTA UU FASHILAN YAHAY SHARCIYADAYDA?
Qaybta subaggu waa kala tagtaa maxaa yeelay waa qabow badan. Soo qaado 1/3 koob oo ah buttercream oo ku dhalaali microwave ilaa ay ka dhalaalayso ka dibna dib u karbaash. Qeybta yar ee subagga diiran waxay ka caawineysaa inay dhammaantood mar kale isu yimaadaan.
QALBIGAYGA WAA JILICSAN YAHAY, MAXAAN SAMAYN KARAA?
Buttercream waa jilicsan yahay ama adag tahay iyadoo ku xiran hadba sida ay u diirran tahay. Haddii ay aad u jilicsan tahay, waxay noqon kartaa in subaggaagu uu aad u jilicsanaa markii aad ku dartay ama makiinaddu ay kululeeyeen. Dhig buttercream qaboojiyaha 20 daqiiqo ka dibna mar kale ku karbaasha oo waa inuu dib u adkeeyaa.
WAA MAXAY SABABTA AAN FUDUD BILAASHA BILAASH AH?
Dadka qaarkiis waxay dhaheen subaggooda subaggu wuxuu leeyahay isku ekaansho hadhuudh ah, laakiin weligay sidan oo kale horay ugama dhicin. Haddii aad leedahay arrintan, isku day inaad kala siisid sonkortaada budada ah ka hor intaadan ku darin ukunta cad ee la kariyey oo aad ku qasto ukunta cad sonkorta budada ah dhexdhexaad ilaa 5 daqiiqo si aad u milisid sonkorta budada ah.
MA TAHAY IN TAHAY IN LA ISTICMAALO FADLAN?
HAA! Waqtiga oo dhan waan sameeyaa, iska hubi inaad qaboojiso keegaaga illaa iyo inta buttercream uu ku adag yahay taabashada ka hor inta aan la codsan. Way fiicantahay aniga marshmallow macmal ah oo macmal ah sidoo kale! Fiiri fiidiyowgayga sida loo daboolo keeg in fondant .
SIDEE AY U XASILSAN TAHAY FARSAMADAN?
Qabowgan ma xoqmayo, laakiin waa xasilloon yahay in la tuubo ubaxa buttercream wuxuuna joogi doonaa heerkulka qolka 2 maalmood. Waa caadi heerkulka ilaa 85ºF laakiin wuxuu ku dhalaali doonaa qoraxda tooska ah illaa 20 daqiiqo sidaa darteed hooska ku dhig! Waxaad ku beddeli kartaa kala badh subagga iyada oo la soo gaabiyo si aad uga dhigto mid deggan heerkulka sare.
Easy buttercream uma xasilloon sidii Mareykan ah ama Subag Talyaani ah laakiin way ka xasilloon tahay qabowga farmaajada qabow ama kareemka la shiiday.
Waxa kale oo aad samayn kartaa a shukulaato cad oo barafoobay subag qoyan adoo kudaraya shukulaatada cad ee dhalaalay dhaxanta buttercream. Tani waxay ka dhigeysaa SUPER qaboojinta buttercream xasilloon oo isku dhafan oo ah buttercream iyo ganache shukulaatada cad.
INTAAN QAADANAYAAN QARANKAN DAMBE?
Easy buttercream waxay socon doontaa 2 maalmood heerkulka qolka, 2 toddobaad qaboojiyaha ama 6 bilood qaboojiyaha. Haddii subaggaaga subaggu uu qabow yahay, hubi inaad mar kale karbaashid ka hor intaadan isticmaalin. Keen subaggaaga subag heerkulka qolka oo bilow inaad karbaasho. Kadib ka saar 1/3 koob oo ah buttercream-ka oo microwave u geli ilaa ay si dhib yar u dhalaalayso, ka dibna dib ugu shub intaad karbaashayso si aad mar labaad u noqoto mid jilicsan.
Haddii aad berrito barafoobayso keeggaaga, iska daa caano-qoynta dusha sare. Uma baahnid inaad ku qaboojiso 2 maalmood gudahood maxaa yeelay subagga iyo sonkorta waxay u dhaqmaan sidii badbaadinteeda.
Haddii barafkaaga buttercream uu fadhiyay heerkulka qolka in ka badan hal maalin, ku qas iskudarka lifaaqa ka hor intaadan u isticmaalin si uu mar kale u noqdo mid jilicsan. Buttercream waxay u egtahay inay isbuunto 24 saacadood ka dib waxayna lumisaa maqaarka kareemka.
SIDEE LOO MIDOOBAA SHAQADA BILAASHKA
Waxaad ku dari kartaa xoogaa dhibco ah jel midabaynta cunnada subag-biyoodka si aad u midabeyso. Midab buu si fiican u hayaa habeenkiina wuu madoobaanayaa. Kaliya iska hubi inaadan ku darin midabaynta cuntada aad u badan ama waad dhadhamin doontaa.
Haddii aad rabto inaad sameysid midabyo madow, iska hubi my neon buttercream post blog wixii macluumaad dheeraad ah.
MA YAHAY DHIIGGA DHALASHADA CADAALADA AH IN AAD CUNTO?
Haa! Ukunta la caddeeyey ayaa lagu daaweeyaa kuleylka (sida caanaha oo kale) sidaas darteed ammaan ayey u yihiin inay cunaan. Badanaa waxay ku yimaadaan kartoon sanduuq ah oo ku dhexjira marinka ukunta.Haddii aadan haysan ukunta cad oo la kariyey markaa waad isticmaali kartaa tayda SMBC cunto karinta halkii. Fiiro gaar ah: Ukunta ukunta oo aan si fiican loo karin laguma talinayo haweenka uurka leh inay ku ekaadaan dhinaca nabdoon.
MA KU DARI KARAA / SAGAR YAR?
Cuntadani ma ahan mid aad u macaan, gaar ahaan haddii aad u baratay subagga Mareykanka. Waad ku dari kartaa sonkor badan oo budada ah hadaad rabto inay ka macaanto, laakiin ma yareyn kartid sonkorta ama subag-biyoodka ayaa aad u jilicsan.
INTA INTIRTIRO AH LOO BAAHAN YAHAY?
Cunnadan fudud ee qaboojinta buttercream waxay ka dhigtaa qiyaastii 6 koob oo ku filan inuu barafoobo oo buuxiyo seddex lakab, 8 cake keega wareega ah. Waxaad u adeegsan kartaa kalkuleylka qaboojiyaha iyo keega kalkuleylka hoose si aad ula qabsato xaddiga dhaxanta aad u baahan doonto iyadoo kuxiran cabbirka keega ee aad rabto inaad sameyso.
KHATARAHA LA XIRIIRA:
Sida loo sameeyo ubaxyo subag badan
Ermine dhaxan (dhadhan la mid ah subagga fudud laakiin ukunta ma leh)
Shukulaatada Shukulaatada fudud
sida loo sameeyo ganache shukulaatada cad
Cunto macaan, hodan ah oo fudud oo qabow badan oo qofkastaaba sameyn karo. Tani maahan qolof qolof qoyan. Waxay ku saleysan tahay meringue sidaa darteed waxay leedahay iftiin yar oo si fiican ugu qabow qaboojiyaha. Waxay qaadataa 10 daqiiqo in la sameeyo waana doqon-caddeyn! Iftiin, qalafsan oo aan macaan badnayn.
Waqtiga Diyaarinta:5 daqiiqado waqti isku qasid:labaatan daqiiqado Wadarta Waqtiga:10 daqiiqado Kalori:849kcal
▢24 oz (680 g) subag aan cusbo lahayn heerkulka qolka. Waxaad isticmaali kartaa subagga cusbada leh laakiin waxay saameyn ku yeelan doontaa dhadhanka waxaadna u baahan tahay inaad ka tagto cusbo dheeraad ah
▢24 oz (680 g) sonkorta budada ah shaandheeyey haddii aan laga soo qaadin boorso
▢6 oz (170 g) ukunta la kariyey heerkulka qolka
▢1 TINY dhibic (1 TINY dhibic) midabaynta cuntada guduudan (ikhtiyaari) qabowga cad
Ku rid ukunta cad iyo sonkorta budada ah baaquli fiicni dhalada. Ku dhaji foornada oo isku dar maaddooyinka hooseeya ka dibna kor ugu karbaasha sare ilaa 1 daqiiqo si aad u milisid sonkorta budada ah
Haddii buttercream-kaaga u muuqdo mid la jarjaray, ka saar qiyaastii 1/3 koob oo ah buttercream oo ku dhalaali microwave-ka illaa 10-15 ilbidhiqsi illaa uu KELIYA si dhib yar u dhalaaliyo. Mar labaad ku shub burcadda subagga la karbaashay ee la isku keenay.
(Ikhtiyaar) Ku dar dhibicdaada midabaynta midabka guduudka ah. Ku karbaal dusha sare ku dheji lifaaqa illaa 8-10 daqiiqo illaa ay aad u caddaanayso, iftiin iyo dhalaal tahay. Dhadhamiya subagga, haddii ay u egtahay jalaato macaan markaa waa diyaar!
U beddel lifaaqa suufka oo isku qas qun yar illaa 15-20 daqiiqadood si aad u sameysid buttercream mid aad u siman oo ka saar goobooyin hawo ah. Tan looma baahna laakiin haddii aad dhab ahaantii rabto dhalaal qabow, ma rabto inaad ka boodo.
U adeegida:labaoz|Kalori:849kcal(42%)|Kaarboohaydraytyada:75g(25%)|Protein:labag(4%)|Dufan:61g(94%)|Dufan Dufan:38g(190%)|Kalastarol:162mg(54%)|Sodium:240mg(10%)|Kaliumperyamper:18mg(1%)|Sonkor:74g(82%)|Vitamin A:2055IU(41%)|Kaalshiyam:18mg(laba%)|Bir:0.4mg(laba%)
Casharka Cake Buttercream Cake
Liin dhanaan Curis ah
Cake Goop Recipe (sii deynta guriga lagu sii daayo)
Cunto Kafeeji Caano Qaboojiye ah
sida loo sameeyo buskudka sonkorta guriga
sida loo sameeyo keeg vanilj qoyan
sida loo sameeyo dhadhanka keega ee aan sonkorta lahayn
sida loo sameeyo beenta ciridka aan dhegdheg lahayn
Shukulaatada Daboolan Casharka Strawberries
Tilmaamaha dhammaystiran ee samaynta shukulaatada dhammaystiran ee miraha strawberries la daboolay iyadoo la isticmaalayo cad cad, caano iyo shukulaatada madow.
Cunto Doctored Strawberry Cake Recipe
Sidee loo sameeyaa dhadhanka keega ee dhadhanka sida keegga guryaha lagu sameeyo! Ku dar waxyaabo yar oo dheeri ah sanduuqaaga caadiga ah iyo dhaxanta leh liinta subag! Si wanaagsan!